Sarkaal gabay ku dhaleeceeyey Jen. Indhaqarshe oo la saarayo maxkamad milateri – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sarkaal gabay ku dhaleeceeyey Jen. Indhaqarshe oo la saarayo maxkamad milateri
Mareeg.com: Waxaa lagu wadaa in maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la horgeeyo Col. Cismaan Cilmi Guure (Cukaash), kaasoo dhaawanahaan ku jiray xabsi kadib markii uu tiriyry gabay uu uga hadlay dhibaatada heysata ciidamada milateriga Soomaaliya, hase ahaatee uu ku dhaleeceey taliyaha milateriaa Jen. Indhaqarshe.
Col. Cukaash oo ah sarakaal milateri, islamarkaana gabayada tiriya ayaa isagoo cabiraya dhibaatada heysta ciidamada xooga dalka, wuxuu tiriyey gabay uu ku sheegay in inta Jen. Indha-Qarshe madax u yahay milateriga ay dhibaatadoodu sii socon doonto.
Arrintaas waxaa ka dacwooday Jen. Indhaqarseh, waxaana sarkaalkaas loo taxaabay xabsiga, maanta ayaana la filaa in markii ugu horreysay uu kasoo hor muuqdo maxkamad milateri oo ku taalla Muqdisho.
Abwaan Cabdi Dhuux oo ka hadlay maxkamadeynta Col. Cukaash ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in loo naxariisto korneylkaas.
“Haddii Col. Cukaash suugaanta ugu tababarnaan lahaa sida uu ciidanka ugu tababaran yahay ma tiriyeen gabayga xanafta leh, marka dowladi waa hooyo, waxaana codsaneynaa in la iska cafiyo” ayuu yiri Abwaan Cabdi Dhuux.
“Waan ka cudur daaraneynaa xanafta ku jirtay gabayga uu tiriyey sarkaalkaasi” ayuu sidoo kale yiri Abwaan Cabdi Dhuux oo la hadlay Radio KNN.
Waa markii ugu horreysay ee sanadahan buruburka kadib maxkamada lasoo taago qof loo heysto inuu sugaan ku dhaleeceey qof mas’uul ah, iyadoo ay jiraan dad farabadan oo hal abuurka ay leeyihiin ku dhaawacay dad kale.
Xabad joojin la dhex dhigay ciidamada dowlada iyo kuwa Ahlusuna ee Galgaduud